Browsing All posts tagged under »#263Chat Homework on Rebranding Zimbabwe«
Here are some of the tweets that relate to today’s #263Chat topic. These questions and/or comments are pertinent. We must address some of these real concerns IF we are play some role in helping to rebrand/re-position or simply explain what Zimbabwe is all about. View as slideshow Yahyà@yahya_tj @263Chat rebranding Zimbabwe cannot start with a […]
Govt blamed for #Xenophobia #263Chat #Twimbos 263chat.com/2015/04/govt-b… via @263chat fb.me/3K0hMS2Sg 5 hours ago
RT @elnathan: There are more South Africans on the streets protesting xenophobia than those who are attacking foreigners. Think of that whe… 5 hours ago
RT @gary_kai: @SirNige @263Chat twitter.com/ZimAchievers_S… 6 hours ago
RT @mashanubian: South African police detained +30 overnight as xenophobic violence simmered around Johannesburg 7 hours ago
RT @CurateZim: 10. What was Masvingo known as before Independence? #KnowYourZimbabwe 7 hours ago